सेप्टेम्बर 12, 2019 सेप्टेम्बर 12, 2019 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments पुरूष, महिला, यौन चाहाना
पुरूषमा भन्दा महिलामा किन वढी यौन चाहाना हुन्छ ? यस्ता छन् कारणहरु । नेपाली समाजमा अझपनि सेक्स (यौन) भन्ने शब्द सुन्ने बित्तिकै प्रायः सबैका कान ठाडो हुने र यो शब्द देख्ने बित्तिकै आँखाहरु टक्क रोकिने गर्छन् । अर्थात हाम्रा ज्ञानेन्द्रीयहरु चनाखो हुन्छन्, अनि जिज्ञासु र कौतुहल बन्छन् । यो शब्द जसमा यति ठूलो शक्ति छ र सबैको ध्यान तान्न र खिच्न सक्छ ।
← सोलार उपकरणले कसरी काम गर्छ ?
यस्तो छ राष्ट्रिय विज्ञान दिवस-२०७६ को नारा →